'Yana' Studio - I-Airbnb
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Ιωαννα
U-Ιωαννα Ungumbungazi ovelele
I-'Yana' Studio iyindlu encane futhi ethokomele enahlome ngokuphelele, endaweni ezolile enokubukwa kwentaba, esendaweni yase-Koumani edolobhaneni i-Messaria yase-Andros futhi ibanga elingu-5 'lokushayela ukusuka enkabeni yedolobha lase-Andros. .
Indawo yedolobhana i-Messaria inenzuzo ngempela, njengoba iyindawo ephambanweni yangempela eya kwezinye izigodi eziningi ezinhle eziseduze kanye nenkaba yedolobha lase-Andros.
Indawo yakhona futhi ivumela abathandi bemvelo ukuthi bakwazi ukufinyelela ngokushesha emizileni embalwa yokuhamba izintaba okuthi - ngokusebenzisa izindawo ezinhle - eziholela kwezinye izindawo eziningi ezinhle zesiqhingi.
Ezinye zezindawo eziseduze ongazivakashela usebenzisa inethiwekhi yomgwaqo noma izindlela zokuhamba izintaba yilezi: Isigodlo sezindela sasePanahrados esinombono omangalisayo, iCave Foros esigodini sase-Aladinou kanye neziphethu ezise-uspoilt kanye nedolobhana eliluhlaza ngokumangalisayo laseMenites.
Ngaphakathi kwebanga elingu-2 'lokuhamba ungathola imakethe encane, indawo yokudlela kanye nesitolo esimnandi.
Ngihlala ngikhona ukuze ngikusize ngemiyalezo, izingcingo noma mathupha kunoma yini ongayidinga.
UΙωαννα Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: 00001053162